Dhagaan bu'uuraa kaawwamee ture, caccabeera. Achi buuten proojaktichaas wallaallameera. Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDhagaan bu’uuraa kaawwamee ture, caccabeera. Achi buuten proojaktichaas wallaallameera.
Dubbii PP obbo Lammaatu xumure. Dr. Abiy gubbaarraa gadi erguuf yaale. Garuu obbo Lammaan achumatti harkatti qabe. Amma obbo Lammaa bira gadi darbuu hin dandeenye. Ummatni obbo Lammaatti amaanaa kennate. Obbo Lammaan Dr. Abiy’tti amaanaa kenne. Dr. Abiy amaanaa isaa nyaachuu ammoo obbo Lammaan ifatti hime. Kana jechuun “amaanaa natti kennattan na harkaa nyaatee quba qabaadhaa” jechuudha. Gama biraatiin “PP’n deebii keessan deebisuuf hin deemu” jechuudha. Dubbiin asitti hudhamte. Amma akkamitti obbo Lammaa irra tarkaanfatanii Dr. Abiy amanan ree? Waa’een PP obbo Lammaaf galuu dhabee natti hin fakkaatu. Sirriitti galeef jedheen amana. Garuu waan Oromoo miidhu ta’uu hubate. Itti gaafatama seenaa jalaa bahuuf amma hime. Amaanaa ummataa nyaachuun isaaf hin danda’amne. Nama amaanaa nyaatuu waan hin ta’iniif ummatni isa amana jechuudha! F A
Dhagaa kana kaa’ee kan ture DhDUOdha. Dhaabichi dhakaa darbatetti dallaallee osoo hin ijaarin ODP ta’e. ODPnis osoo hin bubbulin PP ta’eera. Proojakticha eenyutu dhugoomsa…………………?
የተፈለገዉ ህወሓትን መከፋፈል ነዉ። ነገር ግን አይደለም ህወሓት ደመሂት ጭምር በትግራይ ህዝብ ህልዉና ከህወሓት የተለየ አቋም የለዉም።